မောင်ဖုန်းမြင့်: ပြည်လမ်းပေါ်က အကြိမ်ကြိမ် ဆက်သွယ်တယ် ။
ကျွန်တော့် အတောင်ပံတွေ ဘာလို့ ချိနဲ့ ကုန်ရတာလဲ ဟင် . . . . .
ပျံသန်းဖို့ ကောင်းကင်ကြီး ဟင်းလင်းပွင့်နေပေမယ့် ခိုနား အားဖြည့်စရာ ကွင်း ကောင်းကောင်း မရှိလို့
ပဲပေါ့ . . .။
1980 ခုနှစ် မော်ဒယ်လ် စာသားများနဲ့ ကျွန်တော်တို့ ရှေ့ဆက်သွားလို့ ရတယ် ဆိုတာသေချာခဲ့ပြီလား ။
ပြည်လမ်းမကြီးပေါ်က ကျွန်တော် လှမ်းဆက်သွယ်တော့ ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာ ပြင်ပ ရောက်နေတယ် လို့ ပြောလိုက်တာ ခင်ဗျားလား ..? . . ခင်ဗျား တယ်လီဖုံးလား . . .? ။
"ခက်တယ်" . . . "ခက်တယ် " ၂၄ နာရီမှ တစ်ရက် ၊ ၇ ရက် ၄ ခါ လည်ပြီးတာတောင် မျဉ်းတားထားချင်တဲ့ လိုင်းတွေ ထွက်ကျမလာသေးဘူး . . ။ အခန်းက ဖုန်နံ့ တထောင်းထောင်း နဲ့ မြင် . .သိ . . . ထိ . .တွေ့ ခွင့် ရဖို့ကလဲ ခဏခဏ မတ်တပ်ရပ်ပြလို့ မဖြစ်သေးဘူးလေ . . .။
ကိစ္စမရှိဘူး . . . မောင်ချောနွယ်ဆန်သော နေ့ရက်များရှိတယ် . ..
ကိစ္စမရှိဘူး . . . မောင်ချောနွယ် အတု ရှိတယ် ....
ကိစ္စမရှိဘူး . . . ဆိုမာလီကမ်းလွန်က ပင်လယ်ဓားပြ တွေ ရှိတယ် . . .
ကိစ္စမရှိဘူး . . . ကျွန်တော့ အခန်းထဲမှာ ခင်ဗျား အငွေ့အသက်တွေ မရှိလည်း ဖြစ်တယ် . ။
မြေနီကုန်း လက်ဘက်ရည်ဆိုင်လေးကအထ ။
ဘုံဘဝမှာ မကြံရ ၊ မဆုံ ရပေမယ့် ဘုံဆိုင်ဝမှာ ဆုံနေရတဲ့ စကားများ ဆယ်ဘီးကားနဲ့ သယ်ဆောင်သွား တာ တွေ့လိုက်ရတယ် ။
အထားအသိုများ ။ အခင်းအကျင်းများ ။ သိပ္ပံနည်းကျ အထောက်အထားများ ။ မှုခင်းဆိုင်ရာ ဆေးပညာ ဝေါဟာရများ ။ အိမ်ထောင်မှု ဘုရားတည် ဆေးမှင်ရည် စုတ်ထိုးများ ။ သေချာတယ် ကျွန်တော် သေချာ မသိခဲ့ဘူးဆိုတာ သေချာတယ် ။
ပြည်လမ်းမကြီးဘေး အင်တာနက် ကဖေးလေးကပဲ ထပ်မံ ဆက်သွယ်လိုက်ပါတယ် ။ ခင်ဗျား ရဖို့ မရဖို့ ခင်ဗျားဆီ ရောက်ဖို့ မရောက်ဖို့ ကျွန်တော့မှာ ဘာတာဝန်မှ မရှိဘူး . . .။
ဆက်သွယ်ရေး ဧရိယာ ပြင်ပမှာပါလို့ ခင်ဗျား ထပ်မငြင်းလိုက်နဲ့ ။
Posted by phone myint at 6:11 PM
အိမ်ဖုန်းကို ဆက်ရင်တောင် ဧရိယာအပြင်ဖက်ရောက်သွားတတ်သေးတာ..ငြင်းမှာပဲ
မြင့်တယ် ဒါပေမဲ့ ကြိုက်တယ်ဗျာ..